VaChiwenga Vokurudzira Kuti Vanhu Vangwarire Covid-19
Chiwenga In Bulawayo2
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vakangwarira kurwisana nechirwere cheCovid-19 sezvo chiri kuramba chichitekeshera pasi rose.
Vachitaura semunyarikani pakuparura chirongwa Covid-19 Charity Cycling Campaign muBulawayo, VaChiwenga vati veruzhinji munyika havachakoshesi kutevedzera zvinokurudzirwa kuitwa nevehutano pakudzivirira kutapuriranwa kwehutachiwana hwecoronavirus uho hunokonzera chirwere cheCovid-19.
VaChiwenga, avo vanovewo gurukota rezvehutano, vati Covid-19 iri kudzoka nehukasha kunyanya kunyika dzekumadokero vakayambira veruzhinji kuti vasaite sekuti chirwere ichi hachisisiko.
VaChiwenga vati zviri kubuda pakuongorora chirwere cheCovid-19 munyika zvinoratidza kuti huwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi munyika huri kukwira kupfuura huwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi vabva kunze kwenyika.
Vati muAfrica, South Africa ndeimwe yenyika dziri kubatwawo nechirwere ichi vakatiwo sezvo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti veruzhinji vangwarirewo chirwere ichi.
VaChiwenga vati muBulawayo kunyanya dambudziko rekushaikwa kwemvura rinoisa vanhu panjodzi yekubatwa nechirwere cheCovid. Vati hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti igadzirise dambudziko iri asi havana kutsanangura zvizere.
Vanhu gumi nevanomwe vachachovha mabhasikoro kubva muBulawayo vachienda kuHarare senzira yekukurudzira veruzhinji kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi.
Mukuru wesangano reRotary Club International muBulawayo, VaAlbert Mkandla, avo vakabatsira kuronga chirongwa ichi vaudza Studio7 kuti vaona iyi iri nzira inogona kubatsira kuti vanhu varambe vachikoshesa kudzivirira chirwere cheCovid-19.
Gurukota rezvemitambo, Muzvare Kirsty Coventry, pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvemaindasitiri, VaRaj Modi, vabatana naVaChiwenga mukusangana nevachachovha mabhasikoro ava mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaparura chirongwa ichi.
Mumwe wevachovhi vemabhasikoro ari muchirongwa ichi, Nqobani Gatsheni, ati ari kufara zvikuru kuve muchirongwa ichi chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere cheCovid-19.
Vachovhi ava vachabva muguta reBulawayo mangwana mangwanani uye vanotarisirwa kusvika muHarare mushure memazuva matanhatu.
Zimbabwe yave nevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu vafa nechirwere cheCovid-19, uye vanhu zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, vakabatwa nechirwere ichi munyika yose.